Discs ị nwere ike gee ntị na Ọktoba a | Bezzia
Maria onyekwere | 07/10/2021 12:00 | Akụkọ
N'ọnwa a ị nwere ohere ịnụ na nke mbụ ọba ọhụrụ nke ezigbo aka nka. Na Bezzia anyị enweghị ike ikwupụta ha niile, yabụ anyị mere obere nhọrọ nke ndị na -ese ihe 6 ma ọ bụ otu ndị ahụ ewepụtala ma ọ bụ na -aga ewepụta ọba ọhụrụ n'ọnwa a. Kedu nke ị chọrọ ịnụ?
1 Ndịda na ndagwurugwu - Quique González
2 Ọ ga -abụ ihe ezi uche na njedebe - James Arthur
3 Iri na asaa na -aga n'okpuru - Sam Fender
4 Osimiri na okwute - Morgan
5 Ọtụtụ puku agha - Malú
6 Ndị uwe ojii na -acha anụnụ anụnụ - Lana del Rey
Ndịda na ndagwurugwu - Quique González
N'October 1, Ọktọba XNUMX hụrụ ọkụ nke ọba ọhụrụ Quique Gonzalez: Sur en el valle. Nchịkọta nke Egwu 12 nke akara ọdịdị adị adị, onye dekọrọ na ndị egwu egwu oge niile dịka Toni Brunet (mmepụta na gita), Jacob Reguilón (bass), Eduardo Olmedo (mkpọ) na Alejandro Climent (pianos).
A bịanyere aka n'akwụkwọ ozi ndị ọzọ Quique González Ewezuga "Ọ bụghị eziokwu" nke Kirmen Uribe dere. N'ịbụ onye aha Cultura Rock Records wepụtara, ọ nwere nkewa nke ndị otu Morgan: David Schulthess "Chuches" (Hammond na Wurlitzer) na Carolina de Juan (ụda na -akwado). Site na album anyị enweela ike ige May Ka m nwụọ na Jade, onye ị nwere ike ịnụ vidiyo ya n'okpuru.
Ọ ga -abụ ihe ezi uche na njedebe - James Arthur
Naanị ị ga -eche ruo echi ka ịnụrụ Ọ ga -abụ ihe ezi uche na njedebe, album nke anọ nke James Arthur. Nchịkọta egwu 14 nwere Ọgwụ dị ka onye mbụ, nke anyị nwekwara ike ịnụ na Septemba, Avalanche na Emily.
Ndepụta ahụ etoola n'ụlọ, na mmadụ ole na ole, nke mere ka ọ dịrị nhịahụ karịa mgbe ọ bụla. Mgbe irechara ihe karịrị nde iri atọ site na ọrụ ndị gara aga, ọrụ a ọ ga -arafu ọha ọzọ?
Iri na asaa na -aga n'okpuru - Sam Fender
Iri na asaa na -aga n'okpuru bụ Album nke abụọ nke Sam Fender. Polydor Records wepụtara ya, edekọtara album ahụ na North Shields Bramwell Bronte wepụtara ya, dịkwa ka ihe ngosipụta mbụ ya, ngwa agha Hypersonic (2019). Ọ ga -abụ album ọzọ a ga -ewepụta echi, n'agbanyeghị na ị nwere ike zụta ya na nyiwe niile.
Banyere ọba ọhụrụ a Sam Fender kwuru: «Ọ bụ akụkọ afọ na -abịa. Ọ bụ maka ịka nka. Ọ bụ ememme ndụ mgbe ahụhụ gasịchara, na mmemme ịlanarị. Egwu nke na -enye album ahụ aha ya mere nlele mbụ. Mgbe ahụ wee bịa wee mee ka ị daa.
Osimiri na okwute - Morgan
N'October 15, Osimiri na okwute, Album studio nke atọ Morgan, nchịkọta egwu 10 nke ha malitere ịrụ ọrụ mgbe Covid-19 kpọchiri ya, ya na otu amamihe dị ka ọ na-adị mgbe niile: "were echiche ole na ole ka gị na ha na-agbalị inyocha gburugburu, echiche na ụda ntakịrị."
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ nke ọrụ, na mbido 2021, ndị otu Spanish dekọrọ egwu ndị ahụ na Le manoir de Léon studio dị na France. Site na mmepụta nke Campi Campón, nke Stuart White na -agwakọta na Los Angeles, na nke Colin Leonard na Atlanta mara nke ọma, ewepụtara album ahụ naanị ya ka ọ bụrụ mbido mbụ, Osimiri sochiri ya.
Ọtụtụ puku agha - Malú
Ọzọ n'ime ọba ị ga-enwe ike ige ntị na Ọktọba a bụ Mil Batallas, album studio iri na abụọ nke Malú na-atụ anya ya kemgbe. Ọ ga -abụ na Ọktọba 22 mgbe a ga -ere ọrụ ọhụrụ a nke onye omenkà Spain soro onye nrụpụta Pablo Cebrián rụkọọ ọrụ. "Abụ ọ bụla bụ ọgụ, ọgụ ọ bụla na -enwe mmetụta ma dịrị ndụ ...", kwuru onye na -ese ihe gbasara ọrụ a.
Ihe nzuzo maka olu bụ nlele izizi nke album ahụ wee bịa egwu na -enye ọba ahụ aha ya. Agbakwunyere na ọrụ a bụ ịkpa akwa dị ka ụzọ egwu, abụ ewepụtara na Eprel 29, 2020 n'oge mmalite nke oria ojoo nke Covid-19, nke ọ tụgharịrị uche n'ọkwa nne ya na-esote n'oge ahụ. Ke adianade do, album ga -enwe a onye ọbịa pụrụ iche, Mario Domm sitere na ndị Mexico Camila, onye ga -eso ya na Mgbe oke ifufe gasịrị.
Ndị uwe ojii na -acha anụnụ anụnụ - Lana del Rey
Ndị na -acha anụnụ anụnụ bụ Ndekọ nke abụọ Lana Del Rey na 2021 a mgbe Chemtrails n'elu klọb obodo. Na Mee 20, 2021, ewepụtara egwu atọ dị ka nlele nke ọrụ ọhụrụ a: Ndị na -amachibido iwu na -acha anụnụ anụnụ, Akwụkwọ ederede na ọkụ ọhịa. Abụọ mbụ nke Gabriel Edward Simon dere, nke ikpeazụ Lana Del Rey dere ya na Mike Dean onye bụkwa onye na -emepụta egwu a. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, na Septemba 8 a tọhapụrụ Arcadia.
N'ikwekọ na mmalite nke Arcadia, onye na -ese ihe kwuru, sị: «Echere m na ị nwere ike ikwu na album a gbasara gbasara otu m siri mee, ihe mere na otu m dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, laghachi ma gee abụ atọ mbụ m bipụtara. Ha na -akọ mmalite. Egwu a na -egwu ebe dị n'etiti ma mgbe ndekọ ahụ gbadara, ị ga -anụ ebe anyị nọ taa. Dịka nkatọ na -aga n'ihu na -agba mbọ, ọ dịkarịa ala ọ kpaliri m inyocha osisi ezinụlọ m, gwuo ala, ma na -egosipụta eziokwu na Chineke na -eche naanị otu m si aga ụwa. Na agbanyeghị obi abụọ niile gbasara ịkpa oke adịghị ike na nkọwa enweghị isi maka ịghara igosi oke ọrụ, aga m asị na ọ masịrị m ịgagharị n'ụwa nke ọma, dịka nwanyị nwere amara na nsọpụrụ. Daalụ ndị enyi m maka afọ 18 gara aga bụ ndị bụrụla ihe atụ nke mmasị, ọ bụghị nkwalite. Ọ dịtụghị mgbe m chere na ọ dị m mkpa ịkwalite onwe m ma ọ bụ ịkọ akụkọ m, mana ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ọba a na -agwa ya ma ọ nweghị ihe ọzọ. "
Cheta, ọba ndị a niile ị nwere ike ịge ntị tupu ngwụcha Ọktoba. Kedu nke ị ga -amalite?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Ihe ndekọ ị nwere ike gee ntị na Ọktọba a
Kedu uwe ga -eme ka ọdịda a daa ma ị maghị?
Otu esi eweghachi onye na -eji ejiji ochie site na nkwụsị